Iphrofayili yenkampani-Hunan Sunshine Bio-Tech Co, Ltd
I-Hunan Sunshine Bio-Tech Co, Ltd eyasungulwa e2014, etholakala eTshsha High-Tech Zone, iLugu, yinkampani yezobuchwepheshe ephezulu esebenza eR & D, ekhiqiza nasekuthengiseni izinto ezikhipha izitshalo ezithinta izitshalo (botanical / herbal / plant).
I-Sunlight Bio-Tech ihlinzeka ngokukhishwa okungaphezulu kwekhwalithi yemvelo neyokuphilayo njengezinto zokusetshenziswa ezinkampanini zezokwelapha ze-botanic, abakhiqizi bemikhiqizo yokunakekelwa kwempilo, izimboni zokuphuza kanye nezimboni zokugcoba ekhaya nasemazweni aphesheya. I-Sunlight Bio-Tech nayo inkampani enkulu yezobuchwepheshe ephakeme futhi isebenza kakhulu ocwaningweni kanye nasezimboni zemikhiqizo yokuhlonza izakhi zofuzo kanye nemikhiqizo yezinto eziphilayo ezinamangqamuzana.
Ukuqondiswa kokuthuthukiswa kweLanga nokusetshenziswa kwezithako zemvelo ezisebenzayo, bekuyizinto zokwenziwa ezifuywayo zokwenziwa ekhaya nezihlala kwamanye amazwe, ukudla kwezempilo kanye nezithasiselo zokudla, ubuhle kanye nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu, ukudla nesiphuzo, ukubulala izinambuzane, ukudla kwezilwane nezinye izinkampani emkhakheni wezentengiso yezimpahla, kuthunyelwe ucwaningo nentuthuko, isiko elivela ekuhlanganiseni kwekhambi lehlelo.
Kusukela ukusungulwa kwethu kube kwenzelwa amabhizinisi amaningi amakhulu ekhaya nakwamanye amazwe ukuhlinzeka ngemikhiqizo ephezulu yemvelo, inkampani iphendula ngenqubekela phambili kwinqubomgomo "yangomakhelwane", amazwe asathuthuka nezindawo eziseduzane nezokushintshana kwezomnotho, imikhiqizo yenkampani ngekhwalithi yayo ephezulu kanye nentengo yokuncintisana uthengise i-United States, iJalimane, iBrithani, i-Italy, iCanada, iSouth Korea, iTaiwan, amazwe angaphezu kweziyingi ne-30.